शुसासनको पक्षमा लडिरहने नारायण बहादुर सुबेदिको जित निश्चित । - Janata Ko Aawaj
शुसासनको पक्षमा लडिरहने नारायण बहादुर सुबेदिको जित निश्चित ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २०, २०७९ समय: ११:३२:४२
गोकर्णेस्वर नगरपालिका वडा नं ५ मा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा ५ नम्बर वडा अध्यक्षका उम्मेद्बार नारायण बहादुर सुबेदिको जित निश्चित भएको छ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ५ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष एबम् नेपाली कांग्रेस वडा नं ५ का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार नारायण बहादुर सुबेदि लगाएत चार सदस्यहरु कमला नेपाली, श्रीबहादुर याेगि, लक्ष्मी पुडासैनी र धर्म थिङ लामा
उम्मेदवार रहेका छन।
देशको राजधानी काठमाडौको नजिकै पुर्व पटिको सुन्दर तथा ऐतिहासिक नगरी गोकर्णेश्वरको केन्द्र बिन्दु रहेको जोरपाटी , नयाँ बस्ती , नारायणटार लगायत एरिया यो ५ नम्बर वडामा पर्छ। अध्यक्षका उम्मेद्बार नारायण बहादुर सुवेदी जिल्लाकै लोकप्रिय नेतामा हुनुहुन्छ ।
नेपालि काङ्ग्रेसको ईतिहासमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ ।
नेता सुवेदी असल र गुनि नेताको रूपमा चिनिनु हुन्छ। सुबेदि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अनवरतरुपमा खटिने नेता जनतामाझ लोकप्रिय कर्णप्रीय हुनुहुन्छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उम्मेद्बार रहि जित हासिल गरि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलता पूर्वक राज्य संचालनको अनुभव लिनु भएको उर्जावान युवा नेता हुनुपर्छ ।
उहाँको योगदान ठूलो रहे पनि उहाँ अहिले सम्म पनि पार्टीको तर्फबाट कुनै लाभको पदमा रहि कुनै कमाउने कुरामा उहाँको मन गएन। उहाँले जनताको सेवाको लागि राजनीति गर्नु भएको हो। । नेपाली काङ्ग्रेसमा अनुभवी युवा नेताको छवि बनाउनु भएको सुवेदी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर पाँचलाई बिकास कसरी गर्ने?
जनतालाई कस्तो सेवा सुबिधा दिने? भन्ने कुरामा उहाँको बिलकुल नयाँ भिजन रहेको छ।
ब्यतिगत स्वार्थ भन्दा जनताको हितलाई सबैभन्दा माथि राखी वडाका आम जनताको हितमा काम गर्ने र जनतालाई सेवा सुबिधा कसरी दिने भन्नेमा उहाँ निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । ईतिहास बोकेको पौराणिक गोकर्नेश्वर नगरपालिकाको ५ नम्बर वडालाई कसरि जिवन्त राख्ने? मन्दिरको सहरलाई अझ देश बिदेशमा कसरी चिनाउने भन्न्ने कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँको योगदान समाज र रास्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेतामा हुनुपर्ने सम्पुर्ण गुण उहाँमा छ।
जनताको माग पनि सुवेदी यो वडामा अध्यक्ष हुनुपर्ने रहेकोे छ। उहाँको योगदान वडाबासी जनताले बुझेका छ्न।
नेपालमा हुन गइरहेको आसन्न स्थानीय निर्वाचन २०७९ वैशाख ३०गतेमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गोकर्श्वोर नगरपालिका पाँच नम्बर वडा प्रमुख अध्यक्ष को लागि उहाँलाई नै ल्याउनु पर्ने स्थानीय बताउछ्न।
वडाका मतदाताहरुले पनि जनताको बिस्वास जितेकोले उहाँको जित निश्चित भएको बताए ।
स्थानीय जनताले पनि उहाँलाई खोजी गरिरहेका छ्न। शुसासनको पक्षमा लडिरहने सुवेदी राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन समेत अग्रपंक्तिमा लडनु भएको छ। जेल नेल भोगेको उहाँको अनुभव छ ।
उहाँ करिव साढ़े चार दशक देखि अविचलित रही राजनीतिमा निरन्तर हुनुहुन्छ । यही जप, उपमाको अग्निपरीक्षाका रुपमा वडा प्रमुख उम्मेदवारी दिनु भएको उहाँलाई जनताले जिताउने निश्चित छ।
समर्पणको कदर गरि उहाँलाई उम्मेदवार बनाएकाले जित निश्चित भएको समाजसेवी स्याम श्रेष्ठ बताउछ्न।
उहाँलाई पाँच नम्बर वडाका जनताले मात्र होईन काठमाडौ जिल्ला भरीका देशभक्त न्यायप्रेमी जनताको पनि पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको छ्।
२०४२ सालको सत्यग्रहदेखि २०४६ सालको आन्दोलन या २०६२/२०६३को आन्दोलनमा पनि उहाँ निर्न्तररूपमा अग्रपंक्तिमा लडनु भएको थियो ।
नेपालका हरेक प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक परिवर्तनका उभार बोकेका गतिविधिमा लाग्नु भएको र कर्तव्य निर्वाह गरेको स्थानीय बुद्धिजिबिले बताए ।
यो कर्म उहाँको लागि देश र जनता प्रति विशुद्ध सेवा हो । विभिन्न सामाजिक सेवामा निरन्तर समर्पित हुनुहुन्छ । जनतामा समर्पित रहेको सर्वविधित नै छ।
अनुशासित जीवन बाकी पृष्ठभूमि छ । जसले सुबेदीलाई निस्कलन्क देखाउने गरेको छ। समय सहकार्य र अनुशासन पालना गर्न सधै प्रेरित ब्यक्ति ,स्वस्थ जीवनविना स्वच्छ समाज कसरी सम्भव छ, जीवनका विभिन्न आयाममा आफूलाई परीक्षण गर्ने काम सम्पन्न गर्नु भएको छ।
विभिन्न देशको भ्रमणले देश प्रति माया मुटुमा बस्न सहयोग गरेको छ । विकासका रेखा कोर्न यी सबै अनुभव उत्प्रेरक हुने छन । यसपटक रुख चिन्हको छापमा सुबेदीलाई बिजय गराउन समयको माग छ।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नगरी पाँच नम्बर वडा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस जिउँदो ईतिहास हो ।
यहाँको माटोले सुबेदिको छायां मागेको छ। यहाँको माटोमा प्रतिविम्वित हुने भएकोले सबैको साझाको रुपमा यो नगरिलाई व्यवस्थित र समय अनुकूल कला, संस्कृति, सम्पदा र प्रकृति मैत्रि विकास गर्ने सुबेदिको दृढता र संकल्प रहेको छ । उहाँको उपस्थितिलाई सगुनको धड़ा मानेर विजयमाला पहिराईदिने बाचा सबै वडावासिले गरेका छ्न।
बौद्धिकताले प्रखर युवानेता सुबेदिलाई काठमाडौ को भबिस्य उज्जवल बनाउने कुरामा बिस्वस्त छ्न।
आगामी निर्बाचनमा भारी मात्रा मत दिएर बिजय गराउन अपिल गरेका छ्न।
न्युज सम्बादाता : किसोर ढुंगेल र